Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Tijaabiyey oo Tijaabiyey: Xerada Boot ee Seychelles la yaab leh
Safarka Dalxiiska • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Wararka kala duwan
Xerada Bootka Seychelles
Koox ka mid ah dadka xiiseeya jirdhiska ee ka socda Ruushka ayaa ka helay kaftankii kulaylaha ee ugu fiicnaa dhowaan xeradii kabaha ee Seychelles escapade.
Kaamka kabaha ee Slim Fit Club waa arrin “heer sare ah” oo meelo la yaab leh ayaa loo doortay inay ka soo horjeedaan ka-qaybgalayaasha.
Ujeedada kaamka kabaha waa in la riixo xadka qofka.
Muddadii tobanka maalmood ahayd ee ay jasiiradda joogeen, booqdayaashii ka yimid Ruushka waxay ka qaybqaateen dhaqdhaqaaqyo soojiidasho leh sida dhejiska iyo fuulitaanka dhagaxa Constance Ephelia Resort.
Xerada Bootka Raaxada - Dhab ahaantii waa wax!
Dhacdo sannadle ah, xerada kabaha kabaha ee Slim Fit Club waa arrin “heer sare ah” iyo meelo la yaab leh ayaa loo doortay inay ka soo horjeedaan ka-qaybgalayaasha.
Goobta la doortay waa inay awood u yeelataa inay siiso fursado ku filan isboortiga iyo waxqabadyada xiisaha leh, ogaanshaha dhaqanka maxalliga ah iyo taariikhda, iyo muuqaal ku habboon si looga hortago jirdhiska jirka ee ka -qaybgalayaasha. Seychelles waxaa loo xushay quruxdeeda dabiiciga ah oo kaliya laakiin tan ugu muhiimsan, gaar ahaansheeda.
Marka la eego daweynta raaxada ee ka-soo-bixitaanka, shirkadda diyaaradaha ee Aeroflot ee Ruushka ayaa siisay ka-qaybgalayaashu laba koontorool oo soo-galitaan ah markii ay ka dhoofayeen Madaarka Sheremetyevo iyo sidoo kale gunnooyin dheeraad ah iyo kuwa boorsooyinka, hadiyado summadaysan iyo internet-ka bilaashka ah ee saaran.
Intii aad ku jirtey meeshii aad u socotey, waxaad raadisey adeegyada la -hawlgalayaasha maxalliga ah, oo ay ku jiraan 7º Adeegyada Socdaalka Koonfurta iyo Creole, kuwaas oo bixiya adeegyadooda iyo wada -shaqayntooda ugu wanaagsan si loo xaqiijiyo dhacdo guulaysan.
Sahaminta Xadka Jidhka
Ujeeddada kaamka kabaha ayaa ah in la riixo xaddiga qofka, mid ka mid ah dhacdooyinka ugu waaweyn ee kalandarka gabdhaha Slim Fit Club ayaa ahaa socodkii ugu sarreeyey Morne Blanc iyo Dans Gallas, oo ah laba hawlood oo tijaabinaya heerkooda taam ahaaneed laba waddo oo cajiib ah oo ku yaal jasiiradda weyn ee Mahé. Polina Kitsenko iyo shaqaalaheedii Slim Fit waxay ku dhiiradeen buuraha dhaadheer iyo huurka badan, taasoo ka dhigaysa meesha ugu sareysa dhib aad u yar, oo lagu abaalmariyey vistas neef-qaadashada dhamaadka safarka.
Muddadii tobanka maalmood ahayd ee ay jasiiradda joogeen, booqdayaashii ka yimid Ruushka waxay ka qaybqaateen dhaqdhaqaaqyo soojiidasho leh sida dhejiska iyo fuulitaanka dhagaxa Constance Ephelia Resort ee xeebta waqooyi-galbeed ee Mahé.
Maalmihii aysan ku dhiiran bannaanka hoteelka, barnaamijku ma ahayn mid aad u dhib badan, ka -qaybgalayaashu waxay ku mashquulsanaayeen dhowr hawlo shaqsi iyo kooxeed. Kuwan waxaa ka mid ahaa fadhiyada tababarka isboortiga saddex jeer maalintii.
Qallooca Style Creole
Dhammaan ma ahayn wax u shaqaynaya Slim Fit Club adepts kuwaas oo sida ugu wanaagsan uga soo shaqeeyay dalxiiskii catamaran ee Sainte Anne Marine Park oo ay ku jirtay booqasho iyo dalxiiskii Jasiiradda Moyenne, oo ahayd beertii ugu yarayd ee qaranka ee dhaxalsiisay dadka Seychelles waxaa qoray saxafi hore iyo maanta Robinson Crusoe, Brendon Grimshaw, iyo barbeque dhaqameedka Creole ee xeebta.
Waxaa lagu qabtay mid ka mid ah guryaha Four Seasons Resort Seychelles (magaca buuxa ee hoteelka iyo goobta), gabdhaha waxaa lagu daweeyay xaflad Creole oo hoos timaada halku dhigga '' Moonlight in Paradise '' si loo soo xero geliyo kabaha kabaha oo aad u guulaystay. Burcad -badeednimada oo la mid ah Seychelles, qaybtan bahalnimada ah ee taariikhda jasiiradda waxaa lagu dabbaaldegay fasal mixology ah oo lala kaashanayo soo -saareyaasha khamriga maxalliga ah Takamaka Rum oo hoos imanaysa mawduuca 'Raadinta Qasnadaha'.
Warbaahinta Bulshada iyo Waxyaabo Kale
Abuuritaanka waxyaalo qurux badan oo tayo sare leh, oo iftiiminaya kala duwanaanshaha meesha loo socdo, dabeecadiisa, dhirta iyo xayawaanka, xeebaha, waxqabadyada la soo bandhigay iyo waxyaabo kaloo badan, Ms. macaamiisha heer sare ah ee ku baahsan Russia oo dhan aaladaha warbaahinta bulshada.
Ka -qaybgalayaashii kale ayaa iyaguna dhejiyay oo wadaagey sheekooyinkii guulaha ay ka gaareen Seychelles, iyagoo u soo bandhigay jasiiradaha jasiiradaha Badweynta Hindiya meel cagaar iyo madadaalo leh.